Toetran'ny hoditra amin'ny alika sy ny fitsaboana azy ireo | Tontolo alika
Ny aretina na ny fiasan'ny hoditra izay misy fiatraikany amin'ny alika dia iray amin'ireo aretina mahazatra kokoa izay tompon'ny biby fiompy no tsy maintsy iadian-kevitra. Matetika izy ireo dia miteraka erosion, foza manodidina ny vatan'ilay biby, fihenan'ny volo ary / na hoditra maina.
Matetika ireo dia olana izay maharitra fotoana maharitra ary tsy maintsy mahazo fitsaboana tsy tapaka izy ireo.
Amin'ny tranga maro, ireo toe-javatra ireo dia miteraka fofona alika, araka izany mazàna izy ireo ho diso hevitra amin'ny fahadiovana tsy ampy, raha ny marina, dia misy toe-piainana. Matetika izy ireo dia miteraka antony samy hafa be, anisan'izany ohatra ny katsentsitra, ny fiovan'ny hormonina, ny olana metabolika, ny tsy mahazaka, ny adin-tsaina, ny areti-mifindra, ny fanafody ary koa ny sakafo.
Anisan'ny toe-piainan'ny alika matetika ny alika dia ireto manaraka ireto:
4 allergie na tsy fahazakana
7 Kovetabe fandroana
Toetra iray ateraky ny fisian'ny a katsentsitra kely ambanin'ny hoditry ny alika ka mahatonga mangidihidy mafy; ary vokatry ny fikororohana be loatra dia miafara amin'ny fipoahan'ny volon-koditra, mangidihidy, ary amin'ny tranga sasany, dia mandeha mihitsy aza ny rà noho ny hery ananan'ny bibikely.
Toy izany koa, maimbo matetika no iray amin'ireo famantarana lehibe indrindra an'io aretina io amin'ny hoditry ny alika.
Ny fitsaboana mahomby indrindra hiadiana amin'ny scabies dia mifandray vay na inona na inona ifandraisan'ny alika; Ka raha miakatra ambony seza na fandriana matetika ilay alika dia tsy maintsy hosasana amin'ny rano mangotraka ny lambam-baravarana sy ny fonony.
Fa ankoatr'izany dia ilaina ny fampiasana fanafody. Ny iray amin'ireo fahita indrindra dia matetika ivermectin, satria mamela ny hamafana tsara an'io kilasin'ny katsentsitra io. Ankoatry ny, Tena ilaina ny mandro sy mampihatra menaka amin'ny alika mba hanamaivanana ny fahasimbana ateraky ny fikororohana be loatra.
Rehefa alika dia manaikitra sy milelaka tsy an-kijanona tongony na rangotra be ny sofiny, tsara ny manatona mpitsabo biby, satria mety harary izy noho ny fisian'ny holatra.
Amin'ity tranga ity, ny famantarana ny aretina dia mangidihidy, hoditra sosotra, ary na ny fiovan'ny tarehy aza. Amin'ny ankapobeny, ireo karazan'aretina ireo dia mazàna mitranga amin'ny tongotra sy ny sofin'ny alika, satria any no toerana ahitan'ny holatra toerana mety amin'ny fiparitahany.
Soa ihany fa matetika ny aretina masirasira no mahitsy mitsabo, satria matetika dia ampy amin'ny fampiharana a crème topical hanafoanana azy ireo amin'ny fomba mahomby.
Na izany aza, amin'ny fotoana sasany dia azo inoana fa ny mpitsabo biby dia manondro fandroana fanafody sy / na fanafody am-bava ihany koa.
Mampiavaka azy ireo ny a tena olana Ho an'ny tompona alika rehetra, satria raha mitanjaka ny maso dia tsy azo atao ny mankasitraka ny fisian'ireny bibikely madinidinika ireny, na izany aza, na ny taim-biby sy ny atody parasy dia matetika hita amin'ny volon'ilay biby.
Fleas ara-dalàna miteraka mangidihidy sy milelaka be loatra, miampy teboka mafana sy foza; Amin'ny tranga henjana indrindra, ny alika dia mety ho very ra be ary hanana tsy fahampian-dra, ary ny biby aza mety hampidi-doza kokoa amin'ny otrikaretina katsentsitra hafa.
Mba hiadiana amin'ny parasy dia ilaina ny mifanaraka amin'ny mahazatra, izay misy ny fandroana savony savony ny alika, ary mameno azy ireo amin'ny fampiasana vokatra anti-parasy.
Ny tena mety indrindra matetika dia ny fampifangaroana vokatra marobe, toy ny fampiharana dermatolojika fantsom-panafody sy pilina am-bava amin'ny pilina, satria na dia parasy iray monja aza ny alika, ny fanaikitra azy dia hahatonga azy hijaly be.
Matetika ny alika dia mijaly amin'ny alerika amin'ny sasany mamokatra ampiasaina ho an'ny fahadiovana na sakafo. Ireny allergy ireny dia mety hiafara amin'ny lasa dermatitis, ary miteraka fahasimbana lehibe manodidina ny hoditry ny alika, miaraka amin'izay dia misy fiatraikany ratsy amin'ny toe-pony amin'ny alàlan'ny filana manorata tsy tapaka, izay hiteraka haavon'ny adin-tsaina ambony loatra ka tsy ho fantany ny fomba miatrehana izany.
Amin'ity tranga ity dia ilaina ny mitazona fahadiovana araka ny tokony ho izy, ankoatry ny fanolorana sakafo misy asidra matavy be dia be (Omega 3 sy omega 6) ao fahana hypo-allergenic, izay hanampy amin'ny fitazonana ny soritr'aretin'ity aretina mitaiza ity.
Aretin-koditra izay misy fiatraikany amin'ny alika, izay nateraka vokatry ny a areti-mifindra amin'ny bakteria izay mety hiteraka fihenan'ny volo, foza, mangidihidy, fametahana ary mena.
Miankina amin'ny fiparitahan'ny aretina, ny mpitsabo biby dia hanondro ny fampiasana ireo antibiotika, fanosotra ary savony manokana mba hitsaboana ny olana sy hanasitranana ilay biby. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsara ny vinavinan'ireo vinavina.
Izy io dia misy areti-mifindra izay mamokatra rakotra, rashes ary fery amin'ny hoditry ny alika. Ireo famantarana ireo dia mazàna mora hita amin'ny biby lava volo, na izany aza, rehefa lava volo izy ireo, ny famantarana mahazatra indrindra dia ny fandatsahana ny hoditra sy ny palitao maloka.
Matetika ny follikulitis dia misy toe-javatra hafa amin'ny hoditra, toy ny ratra, hodi-kazo ary / na mahazaka aretina.
Mba hitsaboana an'io aretina io ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia ny fampiharana ny shampoos sy menaka manitra bakteria miaraka amin'ny fampiasana antibiotika am-bava.
Aretin-koditra io noho ny fisian'ny holatra, miteraka aretina izay soritr'aretina mahazatra indrindra dia: volo very, mamontsina ny hoditra sy ny fery mivalana.
Izy io dia miavaka amin'ny maha iray amin'ireo aretina mahafaty indrindra amin'ny alika, satria ny holatra mahatonga azy, miaina ao anaty ny hoho, ny volo ary ny hoditry ny biby izy ireo.
Amin'ity tranga ity, ny fitsaboana tena atolotra indrindra dia matetika tapaho daholo ny volon'ilay alika, omeo fandroana antiseptika izy ary ataovy maina tanteraka ary avy eo asio crème misy antibiotika amin'ny vatany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Toetran'ny hoditra amin'ny alika sy ny fitsaboana azy ireo
Alika tsara ho an'ny latabatra kely
Ny alika tsara indrindra miteraka canicross